အ ဘိုးဖွဈသူ ဆုံးပါး သှားပွီဖွဈကွောငျး စိတျမကောငျးစှာမြှဝလောတဲ့ အေးမွဖွူ - 9Style
အ ဘိုးဖွဈသူ ဆုံးပါး သှားပွီဖွဈကွောငျး စိတျမကောငျးစှာမြှဝလောတဲ့ အေးမွဖွူ
အ ဘိုးဖွဈ သူ ဆုံးပါး သှားပွီဖွဈကွောငျး စိတျမေ ကာငျးစှာမြှဝလောတဲ့ အေးမွဖွူ
မွနျမာ အိုငျဒေါသီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကနတေဆငျ့ အားပေးသူပရိသတျအခိုငျအမာရရှိလာတဲ့ မိုးသိုလေးကတော့ မနညေ့က စိတျမကောငျးစရာကိစ်စတဈခုကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ အဘိုးဖွဈသူ ဆုံးပါးသှားတဲ့ သတငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
အေးမွဖွူရဲ့အဘိုးကတော့ အဆုတျမကောငျးတော့တာ ကွာပွီဖွဈပွီး မနညေ့က ဆုံးပါးသှားခဲ့တာပါ။ အေးမွဖွူရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအတှကျ အနုပညာရှငျတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ အားပေးစကားပွောခဲ့ကွပွီး အဘိုးဖွဈသူ ကောငျးရာသုဂတိရောကျဖို့အတှကျလညျး ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မိုးသိုကတော့ အဘိုးဖွဈသူကွောငျ့သာမက ဒီရကျပိုငျး စိတျညဈစရာ၊ စိတျရှုပျစရာတှခေညျြးပဲ ဆကျတိုကျဖွဈနလေို့ သူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချအကောငျ့ကို ပိတျထားတာဖွဈကွောငျးလညျး My Day မှာ ရေးသားမြှဝခေဲ့ပါသေးတယျ။
အေးမွဖွူကတော့ နာမညျလေးအတိုငျး စိတျထားဖွူစငျသလို အေးအေးခမျြးခမျြးနလေရှေိ့သူဖွဈပမေယျ့ ဒီရကျပိုငျးစိတျရှုပျစရာတှေ ဆကျတိုကျကွုံတှခေဲ့ရတဲ့အပွငျ အဘိုးဖွဈသူကိုပါ ထပျမံဆုံးရှုံးလိုကျရတယျဆိုတော့ တကယျစိတျမကောငျးစရာပါပဲ ပရိသတျကွီးရေ… ဒီလိုအခကျအခဲကာလကွီးမှာ စိတျမခမျြးမွစေ့ရာကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ မိုးသိုလေးအတှကျ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးလညျး အားပေးစကားပွောပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။
အ ဘိုးဖြစ် သူ ဆုံးပါး သွားပြီဖြစ်ကြောင်း စိတ်မေ ကာင်းစွာမျှဝေလာတဲ့ အေးမြဖြူ
မြန်မာ အိုင်ဒေါသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် အားပေးသူပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိလာတဲ့ မိုးသိုလေးကတော့ မနေ့ညက စိတ်မကောင်းစရာကိစ္စတစ်ခုကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အဘိုးဖြစ်သူ ဆုံးပါးသွားတဲ့ သတင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အေးမြဖြူရဲ့အဘိုးကတော့ အဆုတ်မကောင်းတော့တာ ကြာပြီဖြစ်ပြီး မနေ့ညက ဆုံးပါးသွားခဲ့တာပါ။ အေးမြဖြူရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအတွက် အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အားပေးစကားပြောခဲ့ကြပြီး အဘိုးဖြစ်သူ ကောင်းရာသုဂတိရောက်ဖို့အတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိုးသိုကတော့ အဘိုးဖြစ်သူကြောင့်သာမက ဒီရက်ပိုင်း စိတ်ညစ်စရာ၊ စိတ်ရှုပ်စရာတွေချည်းပဲ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေလို့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်အကောင့်ကို ပိတ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းလည်း My Day မှာ ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။
အေးမြဖြူကတော့ နာမည်လေးအတိုင်း စိတ်ထားဖြူစင်သလို အေးအေးချမ်းချမ်းနေလေ့ရှိသူဖြစ်ပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်းစိတ်ရှုပ်စရာတွေ ဆက်တိုက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အပြင် အဘိုးဖြစ်သူကိုပါ ထပ်မံဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ… ဒီလိုအခက်အခဲကာလကြီးမှာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ မိုးသိုလေးအတွက် ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးလည်း အားပေးစကားပြောပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
ကလေးတှေ မကျြစိမှုနျခွငျးမဖွဈအောငျ မိဘတှလေုပျဆောငျသငျ့တဲ့ အခကျြမြား
သားတှကေ အရှယျရောကျလာပွီဆိုပေ မယျ့ ၅ နှဈ ၆ နှဈအ ရှယျ ကလေးတှလေိုပဲ ဆကျဆံတယျ လို့ဆိုလာ တဲ့ သရုပျဆောငျ နထေကျလငျး
သားသမီးတှထေဲက တဈဦးကို ရငျသှေးလေးမြားဂဟော အမှပေေးမယျဆိုတဲ့...
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သူမရဲ့ စိတ်နဲ့ ထပ်တူကျမယ့် ကလေးတစ်ယောက်ကို ခိုင်နှင်းဝေ ရင်သွေးလေးများဂေဟာ...
ခေါငျးစဉျတပျမရတဲ့ အလှတရားနဲ့ မွငျသူကွှရေလောကျတဲ့ နျောဖောအယျထား
အနုပညာနယ်ပယ်ထဲကို ခြေချတာ အချိန်မကြာသေးပေမယ့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို နော်ဖော က...
ဆီလီကှနျထညျ့ ထားတယျ ဆိုပွီး ဝဖေနျနကွေတဲ့ ပရိတျသတျတှေ ကိုအမှ နျ...
မင်းသမီးချော ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းကတော့ ပရိတ်သတ်ချစ် မင်းသမီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ရပ် တ ည် နေသူဖြစ်ပြီး...
အကယျဒမီ စာရငျးကနေ ရှေးရိုးစှဲ အယူတခြို့ကွောငျ့ ထုတျပယျခံရပွီး...
ကျူးပစ်ရဲ့ကျေးကျွန်များ ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ကြတဲ့ အဓိကသရုပ်ဆောင် သုံးယောက်လုံး ဟာ ကိုယ့်နေရာ အတွက်...
ကိုယျ့မှာရှိတာကို ပွပွီးစားခငျြ လို့ မျောဒယျ ဝငျ လုပျတာ”လို့...
ကိုယျ့ မှာ ရှိတာ ကို ပွပွီးစားခငျြ လို့ မျောဒယျ ဝငျ လုပျတာ” လို့ ပွောလာ တဲ့ ရှအေိမျစညျ (ရုပျသံ)...
ကွညျ့ရှုသူ (၁)သနျး ကြျော ခဲ့ တဲ့ ထိ အားပေးကွမျး ခဲ့ကွတဲ့ “ကိုဗဈ...
ပရိသတ်ကြီးရေ နာမည်ကျော် မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော် က တော့ သားလေး ဘုန်းမင်းနေလ ၊...
The Voice ပွိုငျပှဲ ဝငျ ခငျရတနာစိုးကိုသတိပေး စကားတဈခှနျး...
The Voice ပွိုငျပှဲ ဝငျ ခငျရတနာစိုး ကို သတိပေး စကား တဈခှနျး ပွောဆိုလိုကျ တဲ့ မွနျမာအိုငျဒေါက...
ဖစျေ့ ဘုတျ ကွောငျ့ လနျခရူဆာ ကားတှေ၊ တိုကျအိမျတှေ တောငျ...
လှပပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Miss ဂုဏ်ရည်အေးကျော် ဟာစင်မြင့်ထက်မှာ...
နောကျ ထပျ အိမျထောငျပွုဖို့ အစီ အစဉျ ရှိ/မရှိ ဆိုတာကို ပွောပွလာ...
နောက် ထပ် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အစီ အစဉ် ရှိ/မရှိ ဆိုတာကို ပြောပြလာ တဲ့ သရုပ်ဆောင် ချမ်းမီမီကို အလှ...
မွောကျဥက်ကလာ ဝဘောဂီဆေးရုံအတှကျ ကွကျပေါငျးဆီခကျြ အပှဲ (၁၄၀)...
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ချစ်သူတို့ရဲ့ အားပေးမှုကို တခဲနက်ရရှိထားတဲ့ မင်းသားဇေရဲထက်ကတော့ သူ့ရဲ့...
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ(၁၃) ရက်နေ့လေးကတော့ ယုန်လေးရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပါ။ ယုန်လေးကတော့...
မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခင်သဇင်ကတော့...